Oche Lipton, Olympus tii na Sri Lanka | Akụkọ Njem
Oche Lipton, Olympus nke tii na Sri Lanka
Taa, m ga-agwa gị banyere njem dị mkpa na Sri Lanka, Oche Lipton, isi ihe si na Sir Thomas Lipton na-achịkwa ubi tii ya niile ma bufee ha mba ụwa niile. Sri Lanka bụ otu n'ime mba na-eduga na mmepụta na mbupụ tii nke ụdị dị iche iche.
Dika i ghaworo ike ighari, ndia bu Ugbo ulo oru Lipton na Ceylon, otu n'ime ụdị tii kacha mkpa n'ụwa. Osisi ndị ọzọ dị na India, Indonesia na Kenya.
Ihe omumu a di na ugwu di nso na obodo Haputale, n’etiti obodo a, o bu windo zuru oke ka o na-echebara mbara ala nke ndida, ndida na owuwa anyanwu Ceylon nyere elu ya nso 2000 mita.
1 Etu esi aga n’ugbo tea na ebe Lipton?
2 Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Lipton?
Etu esi aga n’ugbo tea na ebe Lipton?
Getgaru Haputale ana m akwado gaa ụgbọ oloko, ma ọ bụ site na isi obodo Colombo ma ọ bụ site na Kandy ma ọ bụ Ella. A na-ahụta netwọọdụ ụgbọ oloko Sri Lanka dịka ụfọdụ n'ime ọmarịcha mma n'ụwa. Ha bụ ụgbọ oloko ochie ndị e ketara site na nchịkwa Bekee, n'agbanyeghị na ha na-agagharị na nwayọ nwayọ nwayọ, ha ruru isi ihe kachasị mkpa nke mba ahụ. Ahịrị nke si Ella gaa Haputale na Kandy na-agafe na mbara ala pụrụ iche. Ekwusiri m ike, gawa ụgbọ okporo ígwè gaa Haputale, ọ bara uru.
Getga ebe ugbo ahu si Haputale nke kacha nfe bu na tuk-tuk (ihe dị ka kilomita 10 na ọnụahịa a na-akwụ ụgwọ). Na ụdị ụgbọ a ị nwere ike ịga mpaghara Lipton niile n’enweghị nsogbu. Ọ ga-abụ okwu gbasara mkparịta ụka n'okporo ụzọ na ọnụahịa ya na onye ọkwọ ụgbọ ala, ọ ga-enwe ike ichere gị na nleta ọ bụla.
E nwekwara nhọrọ nke ibata na-ebuga ụgbọ njem ọha na ụlọ ọrụ ma ozugbo ị gbanwere Tuk-Tuk ime njem fọdụrụ.
Uzo di nno di oke warara ma adighi adi nma. Echere m na ndị chọrọ iji ụgbọ nke ha ma ọ bụ mgbazinye ha gaa leta ebe a na-a teaụ tii ga-enwe ike ị nweta ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Oche Lipton dị n’elu ugwu mana ihu ọma ọ na-agbanye ebe ahụ. Egwu kachasị egwu site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ruo n'isi ugwu. Onwe m anaghị akwado ya ma ọ bụrụ na anwụ na-acha, ebe ọ bụ ogologo njem.
Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Lipton?
Azịza ya dị mfe na tii n'ugbo. Ihe niile anyị nwere ike ịhụ metụtara tii na obodo na obodo niile dị na etiti na-ebukarị tii (na njem nlegharị anya).
Ekwadoro m ka ị gaa njem ụbọchị zuru ezu ebe ahụ:
Soro tuk tuk tuk na Haputale rue elu ugwu ahu, ndi Oche Lipton ma were ọnọdụ mara mma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-achịkọta ihe ọkụkụ. Ozugbo ị ruru n'elu, ihu igwe na ikuku na-ekwe, ị ga-enwe ike ịhụ ọtụtụ agwaetiti Sri Lanka. E nwere ike iji echiche ndị ọzọ tụnyere ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke Ceylon, Adam's Peak, otu n'ime ebe nkiri nke mba India. N'oge a, enwerekwa obere mmanya ebe ị nwere ike ị teaụ tii Lipton ma nwee ọ Liụ.
Mgbe ahụ, m ga-agbada n'ụlọ ọrụ Lipton, ọkara ebe ahụ. Olileanya ị pụrụ ịhụ otú arọ tii epupụta na mkpoko ọgwụgwọ. Ee ee, a na m ekwu ya na nwanyị n’ihi na ha nile bụ ụmụnwaanyị. Dika ihe ha gwara anyi, obu n'ihi na nwanyi nwere ogwugwo di nma mgbe ha na achikota akwukwo karia umu nwoke.
Gaa na ụlọ ọrụ lipton. Lọ ọrụ ọ bụla ị gara, ha ga-akọwa ya usoro nke imepụta tii n'onwe ya, site na owuwe ihe ubi na ubi, site na nzacha nke epupụta, nhazi site na igwe ọ bụla na n'ikpeazụ mbupụ na ire. N'oge niile ha ga-ekwusi ike na ndị ọrụ nwere ezigbo ọnọdụ ọrụ yana na ihe niile dabere na izu oke ma lebara ndị ọrụ na ndị ahịa anya. Mụ onwe m ga-aga ụlọ ọrụ ahụ ugboro abụọ n'ihi na n'ụbọchị nke mbụ enwere abụbụ ndị ọrụ. Otu ihe kwesiri iburu n'uche bụ na ịnweghị ike ịse foto nke ime ụlọ ọrụ ahụ, echere m na ọ bụ n'ihi nzuzo nzuzo ọkachamara.
Sinụ n'okporo ụzọ a kụrụ akụ ma gbalịa bịaruo obodo ndị dị nso nso, ebe ndị ọrụ ha bi nke tii n'ugbo. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ụdị ndụ ime obodo nke ndị bi na ya. Companieslọ ọrụ tii na-ewu ụlọ akwụkwọ na ọbụna obere ụlọ ọgwụ n’obodo ndị a.
Gaa Haputale. Ọ bụ ezie na ọ maghị mma nke ukwuu, echere m na ị ga-ahụ obodo a, nke kachasị mkpa na mpaghara ahụ. Ọnụ ọgụgụ ndị nwere ọtụtụ esi esi, ndị mmadụ, mkpọtụ na ụgbọ ala; ee, ụlọ ahịa tii n’ebe nile.
Agara m eleta ubi na ulo oru 3 nke tea: Lipton, Pedro Tea State na nke obodo. Achọrọ m inwe ọhụụ zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ na-ajụ ase na obere. N'ime ụlọ ọrụ dị na mpaghara ahụ enweghị m ike ịga ụlọ ọrụ mmepụta ihe, enwekwara abụbụ ọrụ, mana akụ ha bụ. Pedro Tea State, na Nuwara Eliya na-ebupụkwa ụwa niile mana na-enweghị Lipton.
Ọ bụla njem Sri Lanka ga-agụnye njem ụgbọ oloko nke akụkụ ugwu ugwu nke agwaetiti ahụ na nleta na ebe a na-azụ tii. Oche Lipton bụ ezigbo ihe atụ nke ịkọ ihe na ọdịdị ala, na nkenke, njem njem 100% akwadoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Colombo » Oche Lipton, Olympus nke tii na Sri Lanka
Algarve, njem site na osimiri kacha mma
Ihe ị ga-ahụ ma mee na Bruges